Mawduuca Tayada iyo Tirada: ROI ee Qorista Yar | Martech Zone
Khamiis, Agoosto 13, 2015 Arbacada, Oktoobar 14, 2015 Douglas Karr
Xalay waxaan lahadlay dhacdo layaableh oo gaar ah oo loogu tala galay dadka ugu sareeya xiriirka bulshada iyo xirfadlayaasha suuq geynta ee Magaalada New York, oo ay dul dhigtay Biyaha dhalaalay macaamiishooda. Waxaan si qoto dheer uga hadlay, sida xogta weyn ay u saameyneyso safarka macaamiisha iyo sida ay u saameyneyso istiraatiijiyadeena nuxurka qadka. Hadalku wuxuu ahaa mid caan ah oo waxaan kula soconeynaa warqad cad oo buuxda!
Mid ka mid ah su’aalaha qof i weydiiyey waxay ahayd sida ay ugu qancin karaan hoggaankooda taas hagaajinta tayada qoraalka oo waqti badan ku bixiya cilmi baarista iyo fulinta istiraatiijiyadooda wax lagu qoro waxay ku heli doontaa soo laabasho aad uga wanaagsan maalgashiga intii aad diiradda saari lahayd tirada qoraallada la soo saaro. Faahfaahintan ka socota Inbound Writer runti sheekada ayuu sheegayaa…
Iskucelceliska qoraalada baloogyada ayaa ku kacaya shirkad $ 900 iyo in ka badan 90% ee qoraalada mareegaha ma soo saaraan natiijooyin
Kama soo horjeedo dhajinta joogtada ah… badanaa waan wacdinnaa soo noqnoqoshada, soo noqnoqoshada iyo ku habboonaanta maaddaama aan ka hadlayno wax ku qorista shirkadda. Joogtayntu waa muhiim maxaa yeelay waxaad dhiseysaa dhagaystayaal iyo bulsho aad waxaad la dajinayso rajooyin. Hawlgalku waa qayb weyn oo ka mid ah akhriska, wadaagista, iyo dhisidda kalsoonida iyo maamulka dhagaystayaashaada.
Laakiin taasi micnaheedu maahan haddii aadan wax la qabsanayn dhagaystayaashaada.
Waanu ka faa'iidaysanaynay Inbound Writer si ay nooga caawiso hawshan dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. Iyo saameynta cilmi baarista mowduucyada la hagaajiyay, la jaan qaadaya dhagaystayaashaada, iyo hubinta inaad ku tartami karto mowduuca waa lama huraan.
Inbound Writer hayaa la wadaaga iyo Analytics si aad u bixiso halbeeg waxqabad adag oo ku saabsan qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha aad qorto. Intaas oo kaliya maahan, waxay sidoo kale isbarbar dhigi doontaa guud ahaan akhriskaaga.
Qaado qoraalkan tusaale ahaan! Waxaan sameeyay falanqeyn ku saabsan mowduuca, waxay khusaysaa dhagaystayaashayda, iyo sida ugu wanaagsan ee aan ula tartami karo:
Dib-u-eegista mawduuca, wax ka beddelka fudud ee ka soo horjeedka iyo ka soo horjeedka ayaa sameyn kara saameyn weyn. Marka waxaan u beddelay cinwaankayga iyo isugeysteyda booskeyga si ay isugu ekaadaan
Natiijooyinka? Guud ahaan, tan iyo isticmaalkeedii Inbound Writer, Waxaan aragnay meel kasta oo udhaxeysa 200% ilaa 800% kororka hawlgelinta mawduucyadeena. Ka fikir taas - kaliya iyadoo la adeegsanayo cilmi-baaris yar oo ku saabsan mowduucyada ku habboon, waxaan dib ugu soo laaban doonnaa maalgashi. Si kale haddii loo dhigo, haddii aan dooneynay inaan ka gaabinno dhajinteenna (sida badanaa dhacda maadaama aan mashquul ku nahay macaamiisha), weli waan sii wadi karnaa kobaca aqristayaasheena iyo ka qaybqaadashadeenna.
Waxaa gabi ahaanba soo noqon kara maalgashiga qorista wax kayar!
Tags: qor -qorcontent tayadatirada ku jirtatiro iyo tiro
Aug 17, 2015 at 9: 53 AM
Qoraalka sare waxaad ku leedahay "Celcelis ahaan qoraalada mareegtu waxay ku kacaysaa shirkad $ 900… laakiin in ka badan 90% ee qoraallada baloogyada waxay soo saaraan natiijooyin ganacsi oo macno leh." Ma waxaa kaa maqan "maya"?
Agoosto 17, 2015 saacaddu markay ahayd 1:12 PM
Doh! La cusbooneysiiyay. Mahadsanid Twila!